Global Voices teny Malagasy » Goatemalà : Ilay Mpanao Jadona Teo Aloha Efrain Rios Montt Nohadihadiana Manokana Mikasika Ny Famonoana Ny Mpiray Tanindrazana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Febroary 2012 3:24 GMT 1	 · Mpanoratra Renata Avila Nandika nirinandrea
Sokajy: Amerika Latina, Goatemalà, Ady & Fifandirana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Ireo mafana fo amin'ny fiarovana ny zon'olombelona dia manahy fa ny fandresen'ilay jeneraly teo aloha Otto Perez Molina  tamin'ny fifidianana ho filoha dia midika ho fihemorana eo amin'ny fitsarana ao Guatemala. Kanefa, tamin'ity herinandro ity, hetsika goavana roa no nampiseho fa ny demokrasia izay goragora ao Guatemala dia efa mihamatotra.
Ny 26 Janoary, ny Kaongresy ao Goatemala dia nanao sonia ny “the Rome Statute of the International Criminal Court “, na ny Fifanarahan'ny Fitsarana Heloka Bevava Iraisam-pirenena natao tany Roma, izay ahafahan'ny tribonaly iraisam-pirenena manenjika ireo mpanao tsinonontsinona ny zon'olombelona, raha tsy mahavita manao izany ny ao Goatemala; io andro io ihany, taorian'ny taona maro nialokalofany tao anatin'ny tsimatimanota avy amin'ny parlemantera, ilay filoha “de facto” teo aloha, Efraín Rios Montt,  dia nohadihadiana tamin'ny mety ho maha-voarohirohy azy amin'ilay famonoana mpiray foko 1700 avy ao Maya ny taona 1982–1983, nandritra ny ady sivily enina ambiny telompolo taona tao Goatemala (1960-1996).
Ao amin'ny bilaogin'ny Filankevitry ny Raharaham-Bahiny, Natalie Kitroeff dia mametraka  ny fiarovan-tenan'i Rios Montt.
Io paika io dia fomba iray vaovao mifanaraka amin'ny zava-misy ao Goatemala. Mandraka androany aloha, ny miaramila dia nandà tanteraka ny hoe nisy famonoana mpiray tanindrazana tao anatin'ilay ady sivily iny. Na dia ilay filoha amin'izao fotoana izao aza, Otto Pérez Molina, dia nilaza fa tsy mino ny filazan'ny komisionan'ny fahamarinana ao amin'ny ONU izy , ary hoe afaka mitondra “porofo izy fa [ilay famonoana ny mpiray tanindrazana] dia tsy nisy,” nandritra ilay ady. Fa i Ríos Montt kosa ankehitriny dia milaza fa tsy hoe tsy nisy akory ny zava-doza niseho, fa izy kosa dia tsy meloka.
Tao amin'ny bilaogin'ny Lawyers, Guns and Money , na “Mpisolovava, Basy ary Vola”, i Erik Loomis dia mijery ny dikan'ilay fitsarana an'i Rios Montt ho an'ny mponina ao Guatemala ankehitriny :
Mike, tao amin'ny Central American Politics , na “Politika Afovoan'i Amerika”, dia nanambara fa i Rios Montt dia nahazo fahafahana vonjimaika ary hijanona ho ambany fanaraha-maso any an-tranony mandritra ny fitsarana. I Mike dia nanampy ny heviny toy izao :
Fandresena miezinezina ho an'ireo mponina ao Goatemala ary tohin'ny zavatra ninoako ho taona miavaka mahafinaritra-miampy ny  fandrosoan'ny zon'olombelona eto amin'ny faritra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/02/28/28272/
 ny fandresen'ilay : https://globalvoicesonline.org/2011/11/07/guatemala-controversial-general-elected-president/
 Efraín Rios Montt,: http://en.wikipedia.org/wiki/Rios_Montt
 nandritra ny ady sivily enina ambiny telompolo taona tao Goatemala : http://en.wikipedia.org/wiki/Guatemalan_Civil_War
 “Andro miposaka ho an'ny rariny ao Guatemala,” : http://www.saltlaw.org/blog/2012/01/27/a-good-dawn-for-justice-in-guatemala/
 dia mametraka: http://blogs.cfr.org/oneil/2012/01/24/guest-post-rios-montt-plays-a-risky-defense-game/
 filazan'ny komisionan'ny fahamarinana ao amin'ny ONU izy: http://plazapublica.com.gt/content/quiero-que-alguien-me-demuestre-que-hubo-genocidio
 taona miavaka mahafinaritra-miampy ny: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/01/201219818067139.html